3d Hifu, 4d Hifu, Siilka Hifu, Mashiinka Qaadista Wajiga - MENOBeauty
11 khadadka HIFU ee wajiga & jirka
Q0 Rullaluiste Vacuum caato ah + Cavitaton + RF + Nalal Iftiin ah
Xifu siilka oo taagan
Maxaad U Dooratay!
Shenzhen MenoBeauty Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 1997, waa shirkadii ugu horaysay ee sayniska iyo teknoolojiyadda ee diirada saarta cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta aaladaha qurxinta & caafimaadka ee caalamiga ah.
Waxaan diirada saareynaa soo saarida aaladaha teknolojiyada sare ee teknolojiyada ultrasound, teknolojiyada RF, tiknoolajiyada faaruqinta faaruqa, taas oo ah Hogaamiyaha Warshadaha Bilicsiga & Caafimaadka ee seddexdan tikniyoolaji. HIFU, VMAX, Qalabka Da'da ee Kahortaga, Qalabka Qaabaynta Faaruqinta Qalabka Vacuum-ka,Shenzhen MenoBeauty Technology Co., Ltd. waa xulashadaada ugu fiican maxaa yeelay waxaan nahay Shiinaha soo saaraha ugu horreeya orginal waxaanan ku siineynaa mashiinno badan OEM & ODM shirkado badan oo ay kujiraan Shiine iyo dibaddaba.
In ka badan khibradaha horumarka ee 20 sano, warshaddeenu waxay uqalmayaan ISO13485 oo hadda waxay leedahay in kabadan 50 tiknoolajiyad caalami ah iyo qalab wax soo saar oo horumarsan, dhammaan aaladaha waxaa lagu sharfay inay ku guuleystaan ​​CE, SII BILAASH, ROHS iwm
Focus RF Anti Laablaab Mashiinka
Vacuum Vertical Focus Mashiinka RF
Bandhigga Qurxinta ee Shanghai